Nwanyị Mary Mary Tricolor 14K - Popular Jewelry
Nwa agbọghọ amaghị nwanyị Pendant Tricolor 14K
Ogo: 25 (mm)Ogo: 33 (mm)Ogo: 40 (mm) size:
Tricolor (Yellow / White / Rose) agba:
Ightdị elu: 25 (mm) / Tricolor (Yellow / White / Rose) - $ 128.39Ightdị elu: 33 (mm) / Tricolor (Yellow / White / Rose) - $ 142.79Ightdị elu: 40 (mm) / Tricolor (Yellow / White / Rose) - $ 200.39 Iche:
Ihe mkpuchi a na-egosi Virgin Mary ka o guzo n'elu ala ọcha ọla edo. Uwe mgboko nwere ọtụtụ ụdị nwere akụnụba na-acha odo odo na-eme ka Meri dị obi umeala.
Oke dị: Ogologo: 33, 40 mm
Ikike dịnụ: ~ 1.30, 2.20 grams *
Nwa m nwoke na eso gi na instagram. Enwere m obi anụrị maka ịdị mma nke ọla m nyere n'iwu !! Ga-n'ezie si n'ebe ahụ n'ọdịnihu!